Telegram koa hanolotra antso am-peo | Vaovao IPhone
Telegram koa hanolotra antso am-peo
Ny antso an-tariby amin'ny WhatsApp dia nanjary, nifototra tamin'ny tsaho, iray amin'ireo safidy andrandrain'ireo mpampiasa indrindra ny sehatra fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Tsy ny WhatsApp no ​​sehatra voalohany natolotra azy ireo, fa io no be mpampiasa indrindra eran-tany, dodona ny mpampiasa hampiasa azy ireo, toy ny antso an-tsary ihany.
Telegram dia niavaka hatrany ho toy ny sehatra iankinan'ny WhatsApp sy ny orinasa hafa rehefa manampy fanamboarana vaovao na fiasa miasa, fa rehefa mividy azy ireo amin'ny WhatsApp dia very foana eo amin'ny sehatry ny antso sy ny antso an-tsary, fiasa iray izay ho an'ny mpampiasa maro dia sady tsy ilaina no tsy ilaina.
@ adinhorman9 Salama e. Misaotra Isika dia ho.
- Pavel Durov (@durov) Janoary 13, 2017
Na izany aza, ireo mpampiasa izay nametraka ny Telegram ho fampiharana tsy misy ifandraisany amin'ny alàlan'ny hafatra, indraindray dia mety tsy azontsika ny safidy ahafahana manao antso amin'ny alàlan'ny sehatra, safidy iray izay raha ny filazan'ny lehiben'ny orinasa dia ho avy io, na ho ela na ho haingana, farafaharatsiny izany no nanamafisan'i Pavel Durov rehefa nanontanian'ny mpanaraka iray izy.
Ity fampiasa ity dia mety hahasoa kokoa amin'ny Telegram noho ny amin'ny WhatsApp satria ny rosiana dia sehatra ifotoran'ny sehatra, mba hahafahantsika manao antso avy amin'ny iPad fa tsy mila manana ny iPhone eo an-tampontsika foana toa ny tranga misy amin'ny sehatry ny fandefasan-kafatra maitso. Ho fanampin'izany, heverina fa rehefa mandeha ny fotoana, io asa io dia ho hita ihany koa ho an'ny kinova desktop, endrika iray hafa manohana azy, hisafidy ny Telegram ho toy ny sehatra fandefasana hafatra fa tsy WhatsApp.
Raha ny lojika dia miankina amin'ny fampiasana ataontsika isan'andro ny zava-drehetra, fa sehatra iray izay manome ahy ny fahafahako mampiasa azy io amin'ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny Internet, Manome ahy tombony betsaka kokoa noho ny iray izay tsy miasa afa-tsy amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny finday avo lenta rehefa ataontsika amin'ny PC na Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Telegram koa hanolotra antso am-peo
Tsy ny Apple Watch ihany: Fitbit dia hivarotra kely ihany amin'ny 2017